Izotheleka maduze eMzansi iBMW 3 Series entsha | Isolezwe
Izotheleka maduze eMzansi iBMW 3 Series entsha
ezezimoto / 7 October 2018, 5:21pm / FANELESIBONGE BENGU
IZOTHELEKA eNingizimu Afrika ngoMashi iBMW 3 Series entsha eqale ukubonakala embukisweni wezimoto iParis Motor Show eqhubeka eFrance. I-3 Series yimoto enomlando kuleli njengoba eminyakeni eyedlule ibikhiqizwa ePitoli ngaphambi kokuthi kwaBMW bashintshe kulo nyaka benze iX3. Kuningi okushintshile kule moto yesizukulwane sesikhombisa ngaphandle nangaphakathi. Inezinjini eziyisithupha okungezingama four-cylinder zikaphethroli, ezingama-four-cylinder zikadizili neyi-six-cylinder kadizili.
IMIBUKISO yezimoto ihlale ibhekwe kakhulu ngabathandi bezimoto ngoba yilapho khona bethola ithuba lokubona izimoto ezintsha ezizayo.
Njengamanje eFrance kuqhubeka umbukiso ongeminye yemikhulukazi emhlabeni jikelele iParis Motor Show eqale izolo nezoze iphothulwe ngo-Okthoba 14.
Kusukela uvuliwe lo mbukiso, izinkampani ezikhiqiza izimoto ezahlukahlukene seziqalile ukuveza izimoto ezizoqala ukudayisa nezinye ezisacabanga ukuzenza noma eziwumfanekiso wokuthi izimoto zazo zangomuso zizoba njani.
Ezinye zezimoto esezivelile kulo mbukiso njengeBMW 3 Series entsha sekuqinisekisiwe ukuthi ziyeza kuleli kanti ezinye abathengi bazogcina ngokuziconsela amathe ngenxa yokuthi ngeke zidayise emakethe yaseNingizimu Afrika.
Ngaphandle kweBMW 3 Series entsha, ezinye izimoto ezibonakele kubalwa kuzo iMercedes-Benz A35 AMG, imoto kagesi iKIA e-Niro nezinye eziningi.